Sidee inuu ka soo kabsado deletedlost files ka flash drive ee Mac
Waa in la ogaadaa in tirtirka file waa mid ka mid ah arrimaha ugu ceeb in user a wajahaya ee la xiriirta dhibaatooyinka guud ahaan in ay yihiin guud ahaan soo food saaray dadka isticmaala arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ku tahay in uu qaato ugu fiican oo gobolka ka mid ah farsamooyinka tahay in la hubiyo in files aan la soo kabsaday oo keliya, laakiin waxay sidoo kale browsed sida doorashada marka ay timaado soo kabashada. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ah waa in la hubiyo in hawsha lagaga bogsanaayo ay xogta waa la hayaa fudud iyo qalabka loo isticmaalo in arrintan la xiriira waa kuwa in la hubiyo in dib u soo kabashada ma aha heshiis weyn oo dhan ka dhigi doonaa. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ka helaan kaalmo gaar ah ayaa loo baahan yahay in si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa oo ay macquul tahay oo kaliya haddii qalabka xaqiijiyo ratings waxaa lagala soo bixi oo ku rakiban. Waxaa jira sababo dhowr ah oo khasaaro xogta laga doodi lahaa in qaybtii dambe ee tutorial iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in qalabka uu soo bandhigay ayaa sidoo kale la hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyadoo aan loo eegayn wax kasta oo xog ka dhigi Sababta tirtirka yahay.
Tirtiray / files lumay ma laga heli karaa qashinka laakiin weli waxay yihiin
Nidaamka ama computer in badan ayaa la isticmaalay iyo mid ka mid ah uu soo gaaray la arrinta khasaaro xogta oo dhan waxay leeyihiin hal shay ee caadiga ah in ay ka shaqeeyaan isla farsamo sida nidaamyada kale oo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in files markii tirtiray ka bin qashinka waxaa macquul ah ku kaydsan disk iyo user ee arrintan la xiriira waa in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah geedi socodka tahay waxaa codsatay in la hubiyo in files waxaa soo kabsaday iyadoo aan wax lacag caddaan ah badan hababka casriga ah sida sare sameeyo Waxa kale oo ka soo kabsado files laakiin kharashka la xiriira waa wax shaqsi macmiil ahaan ma dhali karo sinaba iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in natiijooyinka ugu fiican yihiin oo sidaas daraaddeed helay iyadoo la kaashanayo barnaamijka sameeyo in Doono Halkan lagu sharxay. User waa MARNA soo dajiyo barnaamij kasta oo u gal nidaamka ay dhibaatadu saameysey sida ay u hubiyo in xogta la overwritten samaynta hannaanka soo kabashada xitaa qaali u user ka dhigi doonaa.
Waa mid ka mid ah barnaamijyada oo la hubiyo in ugu fiican ayaa ugu fiican ayaa la siiyaa si ay user ee kharashka ugu yar ee suurto gal ah. Nooc ayaa file taasoo ay taageereyso barnaamijka waa sida soo socota:
Qalab xaqiiqdii waa state of tahay sida uu hubiyaa in hab kabashada sida soo socota waxaa sidoo kale fuliyey:
Lumay Recovery File
Recovery ah Barzakh,
Muuqaaladan kale ee barnaamijka ka mid ah istareexsan ee ay helaan iyo in ay sidoo kale hubineysaa in ugu fiican oo gobolka ka mid ah hawlaha farshaxanka waxaa gundhig. Macna ma laha wax kasta oo hab yahay user ku isticmaali kartaa barnaamijka fudayd weyn iyo qanacsanaanta iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si ay u user mar ma gudahood oo dhan. Qaybta xigta ee tutorial this hubiyo in user helo aqoon fledge buuxa oo ku saabsan isticmaalka qalabka habka ugu fiican in la hubiyo in wacyi aan la abuuray oo keliya laakiin Screenshot in lagu gundhig u ah geedi socodka sidoo kale in la hubiyo in ka dhigi doonaa user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay wax waqti ah gudahood oo dhan.
Sida loo isticmaalo Wondershare Data Recovery for Mac?
Geedi socodka uu soo xiriira barnaamijka ie Wondershare Data Recovery waa mid aad u fudud sidii loo soo sheegnay ka hor iyo sidoo user oo dhan u baahan yahay in la sameeyo waa in la hubiyo in tutorial in uu halkan ku xusan waxaa la socda habka ugu wanaagsan si ay u hubiyaan in Natiijada waa outclass iyo aad xogta ka soo kabsaday oo aan wax arrintan iyo dhibaatada:
1. URL ayaa http://www.wondershare.com/data-recovery-mac/guide.html#tab_01 waa in la adeegsadaa si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah habka farshaxanka waxaa lagu kiciyay dib markii duuban oo socda barnaamijka :
2. Laga soo bilaabo sawirka kor ku xusan user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in file kabashada doorasho laga badiyay la doorto harana user dheeraad ah ee arrintan la xiriira. On shaashadda soo socda in yimaado user ay u baahan tahay in la hubiyo in drive ee qasaaraha ka dhacay waxaa loo doortay iyo user wuxuu sidoo kale u baahan yahay in la hubiyo in badhanka scan in ku yaal dhinaca sare ee shaashadda waxaa sidoo kale ku sii adkeeyey,
3. user waa inay hubiyaan in faylka oo uu soo kabsaday la baarayo iyo kuwa la soo baxey barnaamij waa la baaro si loo hubiyo in kuwa looga baahan yahay waxaa lagu soo kabsaday iyo kuwa kale ee la tuuraa,
Waxyaabaha yahay in la sameeyo ka dib dib u soo celinta guul
Waa in la ogaadaa in hoos ku xusan dhibcood ay tahay in la tixgeliyo in arrintan la xiriira:
1. user waa in la hubiyo in gurmad la abuuray wax kasta oo dib u dhac dheeraad ah oo aan si xaalada ayaa ah mid waligeed ka horimaanin mar kale in mustaqbalka la sameeyo.
2. Kaarka ama qalab in la soo celiyo waa in la bedelo dib u dhac kasta oo aan waana in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in qalabka ugu wanaagsan waxaa markaas bedelay sameeyo.
> Resource > Mac > Sidee inuu ka soo kabsado files tirtiray ama laga badiyay ka flash drive ee Mac